यसरी बेच्छ नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता ? — Motivate News
यसरी बेच्छ नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता ?
Posted on December 14, 2016 by motivate news
मंसिर २९, काठमाडौँ – के नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता बेचेको हो ?
नेपालको संविधानको भाग दुईमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ कानुन अनुसार कुनैपनि नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ, त्यो पनि ग्यारेन्टी समेत गरेर । नेपालको संविधान २०७३ मा मुख्य गरी बंशज र अंगीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था छ ।
नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई दिइने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि चाहिने सिफारिसपत्र लिन भने रु १०,००० (दश हजार) बुझाउनु पर्छ । के सरकारले अन्य क्षेत्रबाट राजश्व उठाउन नसकेर यो अंगीकृत नागरिकता बेच्ने गरेको हो ? होइन भने सिफारिस लिन किन र केका लागि रु १०,००० (दश हजार तिनुपर्ने ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १६ मा राखिएको नागरिक वडापत्रमा नै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न दिइने सिफारिसको दस्तुर रु १०,००० (दश हजार) भनेर उल्लेख गरिएको छ । बंशजको नागरिकता पाउनको लागि भने रू ५० तिरे पुग्छ ।
नेपालभर जुनसुकै सरकारी निकायबाट दिइने अंगीकृत नागरिकता सिफारिसपत्रको दस्तुर एकै हो कि फरक, फरक छ ? नागरिकता भनेको कुनैपनि देशको कानुनी अधिकार हो । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न किन यति धेरै दस्तुत तिर्नुपर्ने ?
नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर अंगीकृत नागरिकताको लागि सिफारिसपत्र लिन जाने धेरै महिलाहरु दस्तुर सुनेर दंग पर्ने गरेका छन् । के नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता बेचेको हो ? यसबारेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
Posted in मुख्य समाचार, लेख रचना, समाचार | Tagged अंगिकृत नागरिकता, नागरिकता, नेपाली नागरिकता | Leaveareply